चितवनको कोरोना अस्पतालमा उपचार नै नपाई बिरामीको मृत्यु ! – kalikadainik.com
चितवनको कोरोना अस्पतालमा उपचार नै नपाई बिरामीको मृत्यु !
मंगलबार, चैत्र १८, २०७६ | २२:२६:१३ |
सुवास पण्डित, चितवन । चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (काेभिड-१९) युरोपमा फैलिन थालेपछि नेपालका सरकारी निकायहरु तात्न थालेका छन् । चीनले केही घण्टामै कोरोना अस्पताल बनाएको चर्चा सुनेका स्थानीय सरकारहरुले त्यस्तै अस्पताल बनाउन थाले ।
त्यसको सुरुवात चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले गर्‍यो । ७२ घण्टा भित्र अस्थायी अस्पताल बनाउने भन्दै काम थालेको महानगरपालिकाले भरतपुरको प्रदर्शनी केन्द्रमा हतार–हतार एउटा संरचना बनायो र ७ चैतमा ओपीडी सेवा सुरु गर्‍यो ।
त्यसको सिकोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले बिना मापदण्डका अस्थायी अस्पतालहरुमा बिरामी राख्न थाले । चालू अस्पताललाई डेडिकेटड बनाउनुपर्ने चिकित्सकहरुको सल्लाह विपरित छुट्टै कोरोना अस्पताल बनाउने होड चल्न थाल्यो ।
त्यस्ता अस्थायी संरचनाहरु बनेपछि अस्पतालहरुले ज्वरो, रुघाखोकी, निमोनियाका बिरामीलाई पनि कोरोना संक्रमणको आशंका गर्दै जाँचै नगरी त्यता पठाउन थाले । सरकारले ५० वा सोभन्दा बढी शैय्याका हरेक अस्पताललाई ज्वरो क्लिनिक खोल्न र आइसोलेसन वार्ड बनाउन भनेपनि कसैले टेरेनन् । अस्पतालहरुले धमाधम रिफर गर्न थाले र अन्य कारणले ज्वरो आएका बिरामी न्यून पूर्वाधार र जनशक्ति भएका कोरोना अस्पतालमा थन्किन बाध्य बने ।
‘कोरोना अस्पताल’हरुले थ्रोट स्वाब निकालेर परीक्षणको नतिजा नआउन्जेल कोरोनाकै उपचार विधि अपनाए । क्रिटिकल केयरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरुलाई आईसीयू र दक्ष चिकित्सक नभएका कमचलाउ बेडमा राखेर उपचार गरियो । यही अवस्थाका बीच ‘कोरोना अस्पताल’हरुमा तीन जना बिरामीले ज्यान गुमाए ।
स्वाब परीक्षणको नतिजाले उनीहरुमा कोरोनाको संक्रमण नभएको देखाएपछि यस्ता अस्थायी अस्पताल पठाएर मर्न बाध्य पारिएको भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सँगै, यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
आठ महिनादेखि मिर्गौला रोगको उपचार गराइरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिका–२२ का सन्तोष यादवलाई एक्कासी ज्वरो र सुख्खा खोकीले ग्रस्त पार्‍यो । चैत ९ गते फलोअपका लागि भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज पुगे ।
तर, अस्पतालले कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्ने भन्दै नयाँ कोरोना अस्पतालमा रिफर गरियो । लथालिंग ‘कोरोना अस्पताल’ले यादवको नाम दर्ता गरेर भर्ना नगरी पुनः चितवन मेडिकल कलेज फिर्ता गरिदियो । परिवारजनले राति ९ बजे फर्काएका यादवलाई मेडिकल कलेजले इमर्जेन्सीमा त राख्यो तर उपचार गरेन । मेडिकल कलेजका डाक्टरको अनुरोधमा उनलाई फेरि १० बजे उठाएर ‘कोरोना अस्पताल’ लगेर भर्ना गरियो । जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका उनले त्यसलगत्तै बान्ता गरे । त्यसपछि अस्पतालले खोकी र बान्ता रोकिने औषधि दिएको परिवारका सदस्यहरु बताउँछन् ।
त्यो रात यादव र उनको परिवारको छट्पटी देखेकी एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरलाई भनिन्, ‘बिरामी छट्पटाइरहेका थिए, जहान परिवार रोइरहेका थिए । उनीहरुले मृगौलाको समस्या छ, डायलासिस गर्न काठमाडौं लैजान्छौं पनि भने, तर कोरोना हुनसक्ने डरले लैजाने अनुमति पाएनन् ।’
कोरोना परीक्षणको रिर्पोट नआएको भन्दै शव उठाइएन । चिकित्सकहरुले मृत्युको कारण कोरोना भाइरस नै भएको अड्कलबाजी गरेका दिनभर शव अस्पतालमा नै राखे । रिर्पोट ‘नेगेटिभ’ आएपछि चिकित्सकले सन्तोषको सास त फेरे । तर, भरतपुरको यो घटनाले प्रश्न उब्जाएको छ, ‘कोरोनाको आशंकामा थुनुवा बनाएर राख्ने अनि बिरामी त्यहीँ मनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको त हैन ?
यो घटनापछि भरतपुर कोरोना अस्पतालले क्रिटिकल केयर चाहिने बिरामी नलिने नीति लिएको जनाएको छ । कोरोना आशंका भएका बिरामीको लागि स्क्रिनिङ र आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने, क्रिटिकल केयर दिनुपर्नेलाई भरतपुर अस्पताल पठाइने कोरोना अस्पतालका प्रवक्ता डा.भोजराज अधिकारीले बताए ।
‘नयाँ सेटअप भएका अस्थायी अस्पतालमा क्रिटिकल केयर सम्भव छैन । त्यसका लागि चलिरहेको डेडिकेटेड अस्पताल नै चाहिन्छ भन्ने पाठ यो घटनाले सिकायो’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यद्यपि अन्य अस्पतालमा हुने मृत्यु र नयाँ कोरोना अस्पतालमा अन्य कारणबाट भएको मृत्युलाई फरक ढंगले अथ्र्याउनु हुँदैन ।’
copy by,, onlinekhabar